Naneho ny fankasitrahany an'i Kanye West i Ilon Mask ary naminavina ny fipoahan'ny Ady Lehibe III
Ny sampy an-tapitrisany no nanao fanadihadiana nandritra ny fandraisana anjara tamin'ny fetiben'ny SXSW tany Texas Austin. Ilon Mask dia niresaka momba ireo olona izay manentana azy, ny fanentanana eny an-toerana, natao hamonjena ny olombelona amin'ny Ady Lehibe Faharoa. Iza moa no voalohany tamin'ireo lisitra malaza ary ahoana no ijanonan'ny millionaire hamonjy ny olombelona? Iza amin'ireto dinidinika ireto no tokony ho vazivazy, ary inona no zava-dehibe?
Creator SpaceX dia mankasitraka ny rapper amerikana
Ilay lehilahy izay mitantana ny tetikasa an-dàlambe ary efa nirotsaka tamin'ny fandaminana ny fandosiran'ny olona ho any Mars, dia namono ireo mpanatrika rehetra tamin'ny fetibe sy ny faminaniany.
Ny fahatairana voalohany sy ny fientanentanam-po avy amin'ny mpijery dia nahatonga ny valin'ny fanontaniana momba ny Mask mikasika ny olona izay mankasitraka sy manentana azy. Ianao, angamba, toy ny eritreritra maro momba ny reniny na ny toetrany ara-tantara? Tsia, tsy nisalasala i Ilon Mask mba hanondroana an'i Kanye West.
Mariho fa tsy ity no fotoana voalohany nanehoan'ny Mask am-pahatsorana sy fanindrahindrana ny mozika. Tamin'ny taona 2015, ny Kanye West dia anisan'ireo olona manana ny lazany am-pahafatesana araka ny Time tablo Amerikana. Na dia hita amin'ny teny maro aza ny fanambarana momba an'i Mask ho marihina sy sangisangy, maro no nihevitra ny teniny ho tsy matotra.
Araka ny voalazan'i Mask, manana ny toetran'ny mpitarika izay mampivoatra azy mandrakariva ny mozika:
"Io lehilahy io dia nino foana ny tenany sy ny heriny, ny teniny ihany dia tsy afaka ny hilevina. Ny fahatokisan-tena ny Tandrefana ihany no nahatonga azy ho amin'izao fotoana izao. Moa ve mendrika ny ho eo amin'ny lisitr'ireo vahoaka be mpanaraka indrindra izy? Ary manontany azy ianao, azoko antoka fa hamaly hoe eny izy. Ity dia olona tsy mitsahatra mijery maso, miasa izy, mametra-panontaniana izy, mandalo tsy tapaka ny fetran'ny mety. Mitaky izany koa amin'ny hafa izy. "
Mieritreritra i Musk fa olona iray manan-tsaina sy manan-tsaina ilay mpangalatra
Ny fanjanahana an'i Mars sy ny fikarohana fialofana amin'ny volana
Mijery ny tantara i Ilon Mask, manambara mialoha ny olombelona "fotoan-tsarotra" sy ny Ady Lehibe Faharoa. Ahoana no fomba ijanonan'ny mpanafika mba hamonjena ny sivilizasiona? Miaiky izy fa miankina amin'ny fanjanahana ny Lalao sy Mars, ary efa manomana drafitra ho an'ny famolavolana ny planeta! Raha nanapa-kevitra ianao fa tsy hitranga tsy ho ela izany dia diso tanteraka ianao, amin'ny 2019 ny fitsapana voalohany amin'ny sambo. Tokony hipetraka ao amin'ny Planeta mena ny fitrandrahana BX Space X BFR ary hanao fikarohana amin'ny ankapobeny amin'ny fiandohan'ny herintaona.
Efa misy amin'izao fotoana izao, i Mask dia mieritreritra momba ny olan'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-tsosialin'ny antoko ary milaza fa ny fifandraisana dia hiorina amin'ny demokrasia mivantana. Ny lalàna vaovao dia ankatoavina raha tsy aorian'ny faneken'ny 60% amin'ny olom-pirenena, ary ny lalàna efa lany dia nofoanana noho ny fifanarahana sy ny fifidianana.
Ahoana ny fomba ahafahana mandany fotoana amin'ny fihetsika mahatsiravina toy izany eo amin'ny fiainana mba hifantohana amin'ny fianakaviana sy ny tenanao? Raha ny zava-nitranga, ankehitriny ny ankamaroan'ny fotoana nanokanan'ny Mask ny taranany - SpaceX ary indraindray dia mamela ny fahalemena ho voahodidin'ny ankizy.
Jennifer Aniston - vaovao farany
Ny Madonna ao anaty corset, lamba ary saron-tava dia nanolotra fanangonam-peo amin'ny endriny manokana
Asher dia misaraka i Grace Miguel vadiny taorian'ny 10 taona niarahany
Ny fianakavian'i Kylie Minogue dia nanery azy hiaraka amin'i Joshua Sass
Justin Bieber amin'ny loka Grammy 2016
Kara Delevin no nanokatra voalohany azy ho mpanoratra
Catherine Zeta-Jones sy Michael Douglas
Io no ofisialy: Nofoanan'ny Shakira ny fitsidihan'izao tontolo izao noho ny olana ara-pahasalamana
Manao akanjo lava eny amin'ny soroka
Frantsay cheese roll
Varavarana fidirana mankany amin'ny trano
Lilia - miomana amin'ny ririnina
Katsaho amin'ny tananao
Rahoviana vao hanjavona ny zaza vao teraka?
Ahoana no hampihenana ny fitomboan'ny volo aorian'ny fanosehana?
Miramistin nandritra ny fitondrana vohoka
Sp 9spsp Lspückspspück L 9 L L Lück L L L L L L Lsp Lspück Lück Lückspücksp Lspspücksp L
Fahafatesan'ny foetus intrauterine
Inona no tokony homeko ny namako akaiky indrindra amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako?